Polyester Cotton Classic Long Sleeve Slim Fit onye na-ele anya na -ewu uwe elu CM197C4100T2
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu CM197C4100T2 Size S-3XL Key word waiter uniform, ile ọbịa, uwe mwụda ogologo, akwa mkpuchi na-akpa akwa 65/35 poly / owu GSM 180g Sewing string Polyester thread ka ana-akpọkwa ya eriri siri ike. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion na-eguzogide ...
Polyester Cotton Classic Short Sleeve Slim Fitressress uwe elu uwe CW197D4100T2
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu CW197D4100T2 Size S-3XL Key wordressress edo, uwe ele ọbịa, uwe mpe akwa, akwa akwa akwa 65/35 poly / owu GSM 180g Sewing string Polyester thread ana-akpọkwa ya eriri siri ike. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion-resi ...
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U406S0100A Size ONE SIZE ቁልፍ word chef HEAD WRAPS, WA Lite WRAPS Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu cotton-staple staple, owu-enweghị ego, enweghị nkụdaaka, enweghị carcinogens, ndụ ọrụ dị ka ugboro abụọ kootu onye isi. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide abrasion dị mma, obere shri…
Cotton Polyester Cotton Classic Long Sleeve waiter edo uwe elu CU1115C125000T6
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu CU1115C125000T6 Size S-3XL Key word waiter edo, uwe ele ọbịa, uwe mwụda ogologo 100% owu Xinjiang Aksu akwa-ogologo, akwa na-enweghị ego, na-emebi emebi, enweghị carcinogens, ndụ ọrụ bụ oge 2 dị ka onye isi nri kootu. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, ezigbo mbufụt resistan ...
Brand CHECKEDOUT Nkebi koodu CW197C4100T2 Size S-3XL Key wordressress edo, uwe ele ọbịa, uwe mwụda ogologo, akwa akwa akwa 65/35 poly / owu GSM 180g Sewing string Polyester thread ka ana-akpọkwa ya eriri siri ike. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, ezigbo ihe mgbochi abrasion, shrinkage dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion-resis…
GRAY Polyester Cotton Classical Short Sleeve Slim Fit onye na-echere uwe edoro uwe elu CM185D5901H
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu CM185D5901H Size S-3XL Key word waiter uniform, ile ọbịa, akwa uwe mpe akwa Uwe 65/35 poly / owu Xinjiang Aksu akwa-ogologo, akwa na-enweghị ego, na-emebi emebi, enweghị carcinogens, ndụ ọrụ bụ oge 2 dika udiri onye isi nri. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, ezigbo abrasion ...
Polyester Cotton Classic Short Sleeve Slim Fit onye na-echere uwe elu na-eyi Shirt CM197D4100T2
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu CM197D4100T2 Size S-3XL Key word waiter uniform, ile ọbịa, uwe mkpụmkpụ mkpụmkpụ, akwa mkpuchi na -eme akwa 65/35 poly / owu GSM 180g Sewing string Polyester thread ka ana-akpọkwa ya eriri siri ike. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion-resistan ...
Wine RED Polyester Cotton Classic Short Sleeve Slim Fit uwe ime uwe elu Uwe agha CW181D0400E
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu CW181D0400E Size S-3XL Key word waitress edo, edo edo, uwe elu mkpụmkpụ akwa 65/35 poly / owu GSM.146g Xinjiang Aksu owu ogologo, akwa na-enweghị ego, na-agbagha, enweghị carcinogens, ndụ ọrụ bụ oge 2 dị ka uwe isi nri oge niile. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, ezigbo abra…
Ugboro abụọ nke agbajiri agbaji na-ere nri na ebe a na-ewepụ bọtịnụ dị ala.
Brand CHECKEDOUT Asambodo OEKO-TEX ọkọlọtọ 100 Ihe Koodu CU101C0100A Size S-3XL Key word chef uniform, chef coat, chef jaket, edo culinary, lele ele, nri nri, edobe ụlọ oriri, kichin edo Fabric 65/35 poly / owu GSM.235g Xinjiang Aksu nke ECO na-eme enyi na enyi ogologo oge, enweghị akwa, enweghị nkụda mmụọ, enweghị carcinogens, ndụ ọrụ bụ oge 2 dị ka uwe isi nri. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. Ọ na-abụkarị ca ...
Omuma nke agbaji agbaji agbaji agbajirila ochi nke akwa jaket ya na nke isi nri ya maka Hotel na Restauranlọ oriri na ọ Cụ Cụ CU104C0401A1
Brand CHECKEDOUT Asambodo OEKO-TEX STANDARD 100 Ihe Koodu CU104C0401A1 Size S-3XL Key word chef edo, chef kootu, chef jaket, edo nri, edo edo, udiri nri, ulo oriri, kitchen usekwu 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu nwere akwa ogologo oge, enweghị ego, enweghị nkụda mmụọ, enweghị carcinogens, ndụ ọrụ dị ka okpukpu abụọ dị ka akwa onye isi. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya ...
Oge gboo ejiji abụọ agbajiri agbaji akwa akwa nri na akwa nri n'otu yana okpokoro ụlọ maka ụlọ oriri na ọ Hotelụ Andụ na nkwari akụ CU104C1100A
Brand CHECKEDOUT Asambodo OEKO-TEX STANDARD 100 Ihe Koodu CU104C1100A Size S-3XL Key word chef uniform, chef coat, chef jaket, edo culinary, uniformity ndi ozo, edo nri, udiri nri, ulo oriri kichin, 65/35 poly / owu GSM.235g Xinjiang Aksu nwere akwa ogologo oge, enweghị ego, enweghị nkụda mmụọ, enweghị carcinogens, ndụ ọrụ dị ka okpukpu abụọ dị ka akwa onye isi. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead li ...
123456 Ọzọ >> Peeji nke 1/30